Pandakatenderera Northern Italy By Train | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Italia > Pandakatenderera Northern Italy By Train
(Last Updated On: 11/02/2020)
Italy ndiyo imwe yenyika dzakakurumbira muEurope yekushanyira nekuda kwemhando dzakasiyana dze dzokugara mukati kwayo miganhu. Northern Italy iri Premier hotspot kana totaura Italian tsika, nezvakawanda kuti vafambi kuona uye kuita. Kana zvakabudiswa waini yakanaka uye achidya pamusoro nyika-kirasi chili kana kudzidza yekare nematende uye machechi, ichi nharaunda zvinowanika yakasiyana zvakaitika kuti ude. Kune zvakawanda dzokugara kuongorora muna Northern Italy, saka kana uine vhiki kana maviri kupedza kuItaly, muri akasungwa kuwana dzimwe nzvimbo captivate iwe. Heano vaviri mazano nzvimbo kushanyira apo achishanyira mishoni Northern Italy nechitima.
Tanga Kutarisa Kwako Kumusoro kweItaly Nechitima mu Milan
Tanga kushanya kwenyu Northern Italy muMilan, chimiro guru munyika. Guta rizere dzinokatyamadza Renaissance mapurani, incredible machechi uye mabasa nyika-kirasi ounyanzvi. Visitors kunogona kutora zuva rwendo kune Italian madhamu uye Southern Alps nharaunda kubva ichi nakisisa yemo. Milan ndiye kumusha Milan Central, uye anoonekwa kuti chimwe chezvinhu yakanaka European chitima dzemapurisa. Iyi ndiyo nzvimbo akakwana kutanga kutenderera kwenyu Northern Italy.
La Spezia kuna Milan Zvitima
Parma kuna Milan Zvitima
The chitima Rwendo kubva kuMilan kuti Venice ndiye maawa yemanyorero maviri nehafu, nezvakawanda girl chitima vafambi anogona kuyemura chako chekufambisa hwindo. Kubva nguva iwe siya chitima yeredhiyo Venice, unogona kubata muchidimbu mukuru Grand Canal, kose mhando watercraft kunogona kuonekwa kufamba nenzira. Venice rinoumbwa 118 Zvitsuwa zvakabatana ne mabhiriji uye vakaparadzana ne migero. guta rino zvikuru Inozivikanwa norunako rwaro, akitekicha, Kunstwerke uye cobblestone migwagwa. Mufambi haabatsiri asi kuwira murudo enchanted nharaunda iyi. Pandakatenderera Northern Italy nechitima haisi kwakakwana pasina kushanyira Venice.
Florence, akakurumbira Renaissance guta, riri chete maawa matatu nechitima kubva Venice. Kamwe iwe kusvika rwendo urwu, anenge ose chikuru nzvimbo iri mukati netsoka kubva pachiteshi chezvitima. Sezvo guta guru Tuscany nharaunda, Florence Anozvirumbidza chikafu chinoshamisa uye waini, pamwe na nyika-kirasi mamiziyamu. Shanyira iconic zvinotyisa, kusanganisira kunokudzwa Ponte Vecchio anonziwo 'Old Bridge', ari chirefu Florence Duomo uye Michelangelo kuti chivezwa Dhavhidhi.
Cinque terra – Pandakatenderera Northern Italy By Train
Ita Cinque Terra wako chokupedzisira vanorega – ichi hunoshamisa nharaunda iri chete maawa mashoma nechitima kubva Florence. Cinque Terra haana mamiziyamu kana kosha nenhoroondo Nzvimbo asi chikamu unoshamisa pamusoro Italian riviéra kuti asiyiwa isina kumbobatwa. Pashure pamazuva achishanyira mishoni Northern Italy nechitima, iyi ndiyo nzvimbo akakwana kunakidzwa Italy dzinongoitika nzvimbo. The nemumakomo kwemhenderekedzo musanganiswa dombo mawere uye vakanaka yemizambiringa mashanu akanaka uye kure misha hove.
Reggio Emilia kuna Levanto Zvitima
KuGenoa kuna Levanto Zvitima
Sestri Levante kuna Levanto Zvitima
Parma kuna Levanto Zvitima
Maguta chokuita chete kuburikidza chikepe, Hiking nzira uye chokwadi chitima mitsetse. Ongorora mawere uye mahombekombe uye wedzera pane imwe naka cafes vakahwanda pamatombo Headlands yakatarisana chiteshi. Ichi rine runyararo nharaunda zvechokwadi mweya-kupinza – nzvimbo yakakwana kuzodzosera energize. Kubva pano unogona kutora chitima kudzokera kuMilan apo unokwanisa kutanga kwako rwendo musha.
Wanga kutenderera Northern Italy nechitima? Tiudze nzvimbo dzaunofarira dzawakashanyira nekutitumira pa @SaveATrain! tiri kushingaira ari evanhu migero yose, buda Saveatrain
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, ndokubva tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-northern-italy-by-train%2F%3Flang%3Dsn – (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#www.chakavak Itari milan yakash travelflorence travelitaly chave